Home > News > ISO Management System:
ISO Management System:
ISO လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲနည်းများမှ ကိုးကားထားပြီး၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်လာရမဲ့ အနာဂတ် SME လုပ်ငန်းတိုင်းဟာ ISO ဆိုတဲ့ အရည်အသွေး အဆင့်အတန်းမှီခြင်းဆိုတာ ကုန်ပစ္စည်းကို ပေးတာမဟုတ်ပဲ မိမိလုပ်ငန်းခွင်မှာ ဒီအချက် (၅) ချက်ပေါ်အခြေခံပြီး၊ တခြားသော တိုင်းတာနှုန်းများဖြင့် တိုင်းတာအကဲဖြတ်မှာမို့ Flexible Working Environment အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲမှု တွေကို ရှေ့ဦးအကြိုပြင်ဆင်ပြီး နည်းစနစ်ကျမှုနဲ့ရင့်ကျက်နေတဲ့ ISO လုပ်ငန်းတွေကို 5S ပုံစံများဖြင့် ဖန်တီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အကြုံပြုရေးသားလိုက်ပါတယ်။
( 1 ) Separate - ခွဲခြားထားမှုရှိခြင်း။
- Use (အမြဲသုံးနေကျ ပစ္စည်း) Unused (အသုံးမပြုတော့တဲ့ ပစ္စည်း) စတဲ့ စာရွက်စာတမ်း၊ ရုံးအသုံးအဆောင်၊ စက်ပစ္စည်းများကို ခွဲခြားထားဖို့လိုအပ်မှာပါ။ ခွဲခြားမှုတွေမရှိတဲ့အခါ မလိုလားအပ်တဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ လုပ်ငန်းခွင်ရှုပ်ထွေးမှု စတဲ့ နှောင်နှေးမှုတွေကိုဖြစ်စေတာမို့ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်း/ မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်း တွေကို ခွဲခြားရှင်းလင်းပြီး ရှင်းလင်းသပ်ရပ်မှုတွေနဲ့အတူ မြန်ဆန်ထိရောက်စေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကို စီမံလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(2) Set in Order - အစီအစဉ်တကျထားသိုခြင်း။
- လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာ ပစ္စည်းအမျိုးအစားမတူညီမှုတွေရှိတက်လို့ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် Label (တံဆိပ်တပ်ဆင်မှု) နဲ့အတူ ဦးစားပေးမှုအဆင့်အလိုက် Arrange (စီတန်းထားသိုမှုတွေ) ဟာလည်း လိုအပ်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Data Management လုပ်လာတဲ့အခါ အချိန်မြန်ဆန်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ပြန်လည်ရှာဖွေတာမျိုးဖြစ်စေ၊ မအားတဲ့အခိုက် တခြားသူသို့ Reference Power ဖြင့်ကူညီလုပ်ဆောင်စေတဲ့့အခါမှာလည်း ထိရောက်မြန်ဆန်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
(3) Shine - သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာထားသိုခြင်း။
- အပိုဖြစ်နေတဲ့ စာရွက်စာတမ်း၊ အသုံးအဆောင် နှင့်အတူ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့အရာတွေကို Cleaning (သန့်ရှင်းမှု) နဲ့ Smarting (စနစ်ကျခြင်း) တွေက လုပ်ငန်းရဲ့ အဆင့်အတန်းမြှင့်စေနိုင်မှာပါ။ ၀န်ထမ်းတဦးချင်းစီပိုင်ဆိုင်တဲ့ စားပွဲ၊ ဗွီဒို၊ အခန်း စတာတွေရဲ့ ရှင်းလင်း-တောက်ပြောင်မှုတွေဟာ မိမိနှင့်အတူ ကုပ္မဏီ၊ ရုံး၊ ဌာန တစ်ခုရဲ့ စည်းကမ်းကိုဖော်ပြနေတာမို့ ဒီအချက်ကိုလည်း အလေးထားပြီးစီမံနိုင်လျှင် ISO လုပ်ငန်းများနဲ့အညီ လုပ်ငန်းအရည်အသွေးမြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
(4) Standard - အဆင့်အတန်းရှိခြင်း။
- အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာတော့ ရှိသင့်တဲ့ စည်းကမ်းတွေနဲ့အတူ လုပ်ငန်းခွင်အလွယ်တကူ ပြီးစီးနိုင်စေရန်အတွက် Guiding (လမ်းညွှန်ပေးမှု) တွေရှိဖို့လိုအပ်မှာပါ။ ဥပမာ - တွေ့တဲ့နေရာကယူ - ကြံုတဲ့နေရာထားတဲ့ နည်းစနစ်မကျမှုတွေကို Re-placing (နေရာတကျပြန်လည်ထားမှု) ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်မှုက စည်းကမ်းဖြစ်လို့၊ 5-S နည်းစနစ်တွေထဲက သင့်လျှော်တဲ့ (Rule - စည်းကမ်း) ချမှတ်မှုတွေနဲ့ လုပ်ငန်းတခုရဲ့ အဆင့်အတန်းတွေကို တိုးတက်မြင့်မားအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(5) Sustain - ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း။
- တိုးတက်လာတဲ့နောက်ကွယ်တိုင်းမှာ ရေရှည်ထိန်းသိမ်းမှုဟာ လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာတာမို့ Housekeeping (လဲလှယ်ပေးမှု) တွေနဲ့အတူ၊ တခုပျက်-တခုပြင်ဆိုသလို Maintaining (ထိန်းသိမ်းမှု) တွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ် တွေကို လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်တွေတိုင်းဟာ ဟောင်းနွမ်းလာတက်တာ သဘာဝဆိုိပေမဲ့ လူတွေရဲ့ဆန်းသစ်ပေးမှု၊ ထိန်းသိမ်းပေးမှုတွေနဲ့အတူ Follow-up (ထပ်မံကြည့်ရှု) မှုတွေနဲ့ လုပ်ငန်းအရည်အသွေးကို ရေရှည်ထိန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁-ခါ အလုပ်ရှုပ်မှာကြောက်ပြီး ၁၀-ခါ ပြန်အလုပ်ရှုပ်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့အခက်အခဲတွေကို 5-S စီမံခန့်ခွဲနည်းကသာ အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တာမို့၊ အစကောင်းဖို့အရေးကြီးသလို အဆုံးသတ်တွေကလည်း ပိုကောင်းနေဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ အချက်အတိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့ (စ-လယ်-ဆုံး) မှာ 5-S ပုံစံဖြင့် မြန်မာ့ SMEs လုပ်ငန်းများ ပိုမိုအရည်အသွေးတိုးမြင့်စေနိုင်ဖို့ မျှဝေရေးသားလိုက်ပါတယ်။
Make Local - Trade Global
(B2B International Trading Platform)
Ask to economic analysis. The main message is three parts. The first part is the role of business, Of course, because the government economy. In the second semi-connected to the Myanmar government's role in business and private. Future, the private economy and private sector in Myanmar. Based on these three will focus. This section first introduced before 1948, Myanmar U Thein Sein's administration and economic change in the economic perspective and presentasummary review.Professor Aung Tun Thet. . First, just the country's economic landscape, In other words, if you consider the economic history Since, 1948 also need to think about. The need to think about in 1945 after the Second World War, when compared to those of other countries and the very independence. Neighboring countries such as Malaysia, Singapore in 1958 because teachers than ten years later. Vietnam takes quite. True they continued. I wasateacher in Southeast Asia, Attempts martyr leaders early independence. So i...
#Success အောင်မြင်ပြီးသူတို့ ပြန်လည် ကျရှုံးသည
# #အောင်မြင်ရန် နည်းလမ်းတွေ၊ လမ်းစဉ်တွေ ပဲ ရေးနေတာ ဒီတစ်ခါတော့ အောင်မြင်ပြီးေ တာ့ ပြန် လည် ကျရှုံးရတဲ့ အကြောင်း အရင်း ကိုလည်း မျှဝေ လိုပါတယ်။ ယခု စာက အသက်မွေး ဝမƟ...
SUCCESSFUL BUSINESS - အောင်မြင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျာ&
အောင်မြင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေမှာ ဘယ်အချက်တွေက အားသာနေသလဲ၊ ဘာကြောင့်အောင်မြင်သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေနဲ့အတူ ယခုဖော်ပြချက်တွေဟာလည်း သင့်ရဲ့)...
Studying World top companies
SMEs Management (SMEs လုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲမှု)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမှာ (၉၇ %) ခန့်ဟာ SMEs လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံစီးပွားရေး အချိန်တိုအတွင်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာဖို့ဆိုရင် စီးပွားရေးတွေရ&#...
HR Management (၀န်ထမ်းရေးရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ စီမ&
လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်တိုးတက်မှုမှာ Company, Staff, Customer, Supplier တွေရဲ့ အားသာချက်များဟာ တခြားထက် သာလွန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာလည်း ၀န်ထမ်းရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမ)...